Mist Eliminator Kuisa Manual - Nantong SuTong Kuparadzana Technology Co., Ltd.
Mist Eliminator Kuisa Manual
Yakatumirwa pa 2020-03-18
1. Column Yemukati Kuisa Nzira Nzira Pfupiso
Pamberi pekodhi yakaiswa mukati, manhole anofanirwa kuvhurwa mazuva matatu zvisati zvaitika kuti mweya ubudise, apo okisijeni zvemukati bvunzo Kuedzwa, ipapo inogona kupinda mukomboro yekushanda.
1.1 Manera uye davit yekuisirwa inofanira kunge iri munzvimbo, isati yatanga basa.
1.2 Kana paine vashandisi mukoramu yekuita kuvaka, panofanirwa kuve nekutarisirwa kwakakosha kunze kwekoramu.
1.3 Kana moto-basa rinoda kuti riite mugwaro redhiyo, kuda kuisa mvumo yebasa remoto, iyo yekudyidzana yekubatana nzvimbo pakati pemagetsi magetsi uye ikholamu shell inofanirwa kuwedzerwa dura rejubhi kuchengetedza.
1.4 Shandisa tambo yehemp kutakura maburi epasi mukati kunzvimbo dzekuisa dzepasi, panguva yekusimuka, iyo opareta pazasi inofanira kumira kune rumwe rutivi, kana ikawa nhengo dzemukati dzakakuvara.
1.5 Iko kushanda kwekuvhenekesa magetsi magetsi mukati mehafu inofanirwa kuve yakachengeteka magetsi kwete kupfuura 24V.
2. Kudhira Kuiswa
2.1 Kudhiza dhizaini inofanirwa mushure mekumanikidzwa kwechikamu inofanirwa uye yakanatswa, kana ichiiswa, inofanirwa kuve yakasimba zvichiteerana nedhirowa, kuverengera kunaka kwekuiswa.
2.2 Izvo-pre-weld zvikamu uye chikamu chekutsigira (zvakaita sedenderedzwa, chigaro chetsigiro, rutsigiro, dzvinyirira danda), kuda kuendesa kune saiti kumberi, uye isa mukoramu.
2.3 Ivo vanoisa vashandi vanoisa iyo pre-weld chikamu uye kutsigira danda munzvimbo.
2.4 Mushure memaranda ekutsigira akaiswa, simudza dhayeti. Isa maererano nemufananidzo.
2.5 Mushure mekumisikidza kuiswa, gadzira iyo yekudhinda danda（kana） panzvimbo, Dhinda demister zvine simba nepepanhau danda, uye pakupedzisira sungisa zvinosungisa.
2.6 Simbiso pamusoro pemvura uye manhole butiro uye yepasi kamwene inotora matanho ekudzivirira kudzivirira kupwanya kana kuvhara., kana uchibata iyo demister, tora zvishoma, kudzivirira kubonderana uye kusvibiswa, uye dzivisa deformation uye kukuvara.
2.7 Vashandi vekumisikidza havabvumire kutakura zvimwe zvekuwedzera kunze kwekubatanidza uye zvishandiso zvinodiwa, mushure mekugadziriswa kwedhistera kwapera, unofanirwa kutarisa kuti usakanganwa maturusi mukoramu.
Prev: Itaiwo Munguva 2018 ACHEMA (Booth No. E42-4 In Hall 5.1)
Inotevera: ZWF Yakagadziriswa Packing